Fridolin oo ka deyriyey sharciga KMG laga dhigo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
La daabacay onsdag 25 november 2015 kl 11.36
"Waa go'aan adag oo ku qasbaneyn"
Wasiirka waxbrashada ahna afhayeenka xisbiga Miljöpartiet Gustav Frdilon. Foto: Jessica Gow/TT´.
Sharcig kumeelgaar ah dhalaanka kelinimada waddanka ku imaada in la siiyo ma ahan hindise wanaagsan.
Sidaas waxaa yeri afhayeenka xisbiga Miljöpartiet Gustav Fridolin, mar laga wareysanayey laanta hindisaha cusub ee dowladda ee ku sabsan socdaalka.
– Waa hindise aad u liita. Sharciga KMG ah waxuu sii xumeynayaa fursadaha is-dhexgalka iyo fursadda uu qofka ku dareemi karo amni iyo in uu dalka qayb ka yahay, ayuu yeri Gustav Fridolin oo ah afhayeenka Miljöpartiet ahna wasiirka waxbarashada.
Waxuuna intaas araaciyey in xisbigiisa ay muhiim u aheyd in sharuucda cusub ee dowladda aysan taaban dhalaanka horey waddanka u soo gaaray ee magangeliyada dalbaday. Waxuuna yeri sharuucdii hore ayaa ayaa dhalaanka khuseyneysa, oo waxay helayaan deganaansho rasmi ah.
– Go’aanka dowladda gaartay waxaa qasab ka dhigay xaaladd ah in Yurub inteeda kale iska diiday in qaataan masuuliyadda ka saaran qaxootiga. Haddii waddamada kale ee Sweden masuuliyaddooda qaadan la haayeen xaalka sidaan maanta ma ahaadeen, ayuu yeri.
In go’aanka dolwadda ku yareyneyso qaxootiga Sweden yahay mid xanuun ku haya xisbiga Miljöpartiiet way cadahay. Waa go’aankii ugu adkaa ee xisbiga wax ka gaaray, ayuu yeri Gustav Fridolin.
– Labo wax yaa muhim ah in aan cadeyn. Mid waa in Sweden weli u taagan tahay difaacidda xaquuqda magangeliyo iyo xeerar caalamiga ah ee la xiriira. Xaquuqdas oo hadda ku sugan khatar u baahan in laga difaaco. Sweden na weligeed xaquuqdas ma taabaneyso. Midda kale ee ay tahay in aan qiro waxay tahay arrinkan ma ahan siyaasad xisbiga Miljöpartiet uu qaadan lahaa haddii aan keli ku ahaan laheyn xukunka , laakiinse waxaa keenay xalad aan ku qasbanahay in aan aqbalno madaama aan awoodda dowladda xisbi kale la waddagno taas oo qasab ka dhigeysa tanaasulaad iyo qadashada go’aanada adag, ayuu yeri.
Dawladda oo heshiis ku gaartay dhaqaalaha taageerada caalamiga ee qaxootiga dalka loo qoondeeyey
onsdag 25 november 2015 kl 09.57
Åsa Romsson oo ka ilmeyneysa go’aanka lagu joojiyey qaxootiga
onsdag 25 november 2015 kl 09.56